स्वास्थ्य Archives - नेपाली प्रोफईंल
कोरोनाका कारण विश्वभर २ लाख ८३ हजार बढीको मृत्यु, अमेरिकामा मात्र ८० हजार बढीले ज्यान…
२९ बैशाख, काठमाडौं । विश्वभर कोरोना महामारीका कारण २ लाख ८३ हजार ६ सय ८७ जनाको मृत्यु भएको छ ।४१ लाख ७७ हजार बढी संक्रमित मध्ये करिब १४ लाख ८८ हजार उपचार पछि निको भएका छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा… ke
http://redchairrocks.com/nl-NL/money-you-bank_15-05-2020 काठमाण्डौ – दक्षिण कोरियाका क्लब र बारहरू फेरि बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ । दक्षिण कोरियाको सरकारले आउँदो एक महिनासम्मका लागि क्लब र बारहरु बन्द गर्ने घोषणा शुक्रबार गरेको हो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएर पनि नियन्त्रण गर्न सफल भएको…
काठमाडौं । चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण चलनचल्तीमा आएका केही नयाँ प्राविधिक शब्द नेपाली शब्दकोशमा थप्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले तयारी गरेको छ । हाल चलतचल्तीमा आएका थुप्रै नयाँ शब्द अबका पुस्ताले बुझुन् भन्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले नयाँ शब्दहरु थप्ने…
casino moon काठमाडौं । कोरोना सङ्क्रमित भई सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उचाररत थप एक व्यक्ति आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ । उपचाररत कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाकी ५० वर्षीया महिला कोरोना पोजेटिभ निको भई अस्पतालमाबाट डिस्चार्ज हुनुभएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो…
पुड्कोपनको सस्या पछिल्लो समय अस्वस्थ खानपानका कारण बढीरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । अधिकाशं हामी कतै पाहुना जाँदा होस् वा पाहुनाको स्वागत गर्दा सजिलोका लागि भन्दै जङ्गफुडको प्रयोग गर्दै आइरहेका छौ । यसरी कोशेलीका रुपमा लगिएको जङ्गफुड खानका बानि लागेका… jeux de art
gry online roboty साग आफैंमा उपयोगी तरकारी हो । पकाएर र काँचै खान मिल्ने साग स्वादिलो पनि हुन्छ । त्यसमा पनि रायोको साग बहु उपयोगी हुन्छ ।संसारभर पाइने अनकौँ तरकारीमध्ये दोस्रो बढी पोषणयुक्त तरकारीमा रायो पर्छ । तसर्थ, रायो स्वास्थ्यका दृष्टिले झनै लाभदायक…
jonny jackpot एक सानी बच्चा छिन्, जसलाई आमाबुवाले अति नै स्यहारसुसार गरेर हुर्काएका छन् । उनलाई जथाभावी खेल्न दिइदैन, छुन दिइदैन । धुलो, पानी, फोहोरको सम्पर्कमा आउन दिइदैन । अलिकति पनि फोहोर-मैला हुन दिइदैन । उनलाई हरक्षण सुकिलो मुकिलो राखिन्छ । उनको…
http://triviumdg.com/?map10 काठमाडौं : मुलुकमा ५ देखि १९ वर्षमा बालबालिका र किशोरकिशोरीमा हुने मोटोपना पछिल्ला ४० वर्षमा २९ गुणाले बढेको छ । यो समस्यामा कमसल खानाले गर्दा बढेको हो । ‘विश्वमा बालबालिकाको अवस्था २०१९–बालबालिका, खाना र पोषण’ सम्बन्धी युनिसेफले मंगलबार जारी गरेको…
तपाईंको घुर्ने बानी छ ? वेवास्ता नगर्नुस्, हृदयघात होला
काठमाडौं : नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डा. निर्मला तामाङका अनुसार धेरैको निद्रामा घुर्ने बानी हुन्छ, वरपरकालाई घुर्ने बानीले समस्या भए पनि आफूले घुरेको छु भन्ने आफैँलाई थाहा हुन्न । उनले निद्रामा घुर्ने बानी मोटोपना भएका र ज्येष्ठ नागरिकमा धेरै हुने…
काठमाडौं : विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले काठमाडौँ उपत्यका डेङ्गुको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ । डब्लूएचओ विशेषज्ञहरूको टोलीले नमुना सङ्कलन गरी गरेको अध्ययनपछि यो जानकारी आएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले डब्लूएचओ टोलीलाई आमन्त्रण…